Real Madrid oo dalab 42 milyan ginni ah ka gudbisay Kylian Mbappe bisha Janaayo. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Real Madrid oo dalab 42 milyan ginni ah ka gudbisay Kylian Mbappe...
Real Madrid oo dalab 42 milyan ginni ah ka gudbisay Kylian Mbappe bisha Janaayo.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay dalab 42 milyan ginni ah ka gudbisay garabka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe suuqa kala iibsiga ee bishaan.
23-sano jirkaan qandaraaskiisa Parc des Princes ayaa dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkan, taasoo la micno ah in PSG ay halis ugu jirto inay bilaash ku weyso xagaaga xiddigeeda reer France.
Si kastaba ha ahaatee, Los Blancos ayaa dooneysa inay si dhaqso ah u hesho Mbappe ka dib markii laga soo diiday dalab 150 milyan ginni ah xagaagii hore, hogaamiyaasha La Liga ayaa laga yaabaa inay bartilmaameedkooda ku helaan qiimo jaban.
Marca ayaa ku warameysa in wakiilka kubada cagta Giovanni Branchini uu sheegay in Real Madrid ay haatan dib ugu laabatay PSG dalab kale oo ku kacaya 42 milyan ginni, iyadoo PSG ay cadaadis ku saartay inaysan waxba ku lumin Mbappe dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Florentino Perez ayaan wali ka quusan baacsiga uu ugu jiro Mbappe kaas oo xili hore muujiyay rabitaankiisa ah in uu u ciyaaro kooxda Real Madrid, wuxuuna doonayaa in uu la soo saxiixdo xiddiga heerka caalami ee dalka France ka hor inta ayna Los Blancos wajihi doonin PSG tartanka Champions League 16 ka bisha soo socota.
Mbappe ayaa 150 gool u dhaliyay kooxda PSG kadib markii uu 18-daqiiqo saddexley ka dhaliyay Vannes kulankii ugu dambeeyay ee Coupe de France
Jihooyinka shanta kursi ee maanta soo baxday. Farmaajo oo biyo qaboow...
CABDI XAASHI HOGAAMIYE NOOCEE AH AYAA BADBAADIN KARA SOMALIYA MAANTA?
Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Caawa Oo Isniin...
Ruushka oo qaaday tallaabo ka dhan ah Joe Biden iyo madax...
Mareykanka oo xayiraad socdaal saaray qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida.
Siciid Siyaad oo qarka u saaran inuu qaato kursiga Aqalka Sare...
Madaxweyne XASAN oo ka dagay Dhuusamareeb + ujeedka